सफलताको कथा : विश्वकै धनी जेफ बेजोसको सफलता, ग्यारेजदेखि ग्याजेटसम्म ! — Motivatenews.Com
सफलताको कथा : विश्वकै धनी जेफ बेजोसको सफलता, ग्यारेजदेखि ग्याजेटसम्म !
जागिर छाडेर व्यावसायी बनेका बेजाेसलाई धेरैले टाट पल्टिन्छस् भने । तर, उनी मेहनत गर्दै अगाडि बढे । अहिले उनी अनलाइन बुक स्टोरका रुपमा मात्रै सीमित नभएर विभिन्न कम्पनीहरु आफू मातहतमा सञ्चालन गरिरहेका छन्
उनलाई सन् २०१८ मार्च ६ मा फोब्र्स म्यागेजिनले विश्वकै सबैभन्दा धनी मानिसको रुपमा घोषणा गर्‍याे । फोब्र्स म्यागेजिनका अनुसार उनको कुल सम्पत्ति ११२ अर्ब डलर रहेको छ र सेयरमुल्य बढेसँगै उनको सम्पत्ति अझै बढ्दै गइरहेको छ । २०१९ मा पनि उनी पहिलो नम्बरमै छ ।
२०७६ साउन ८ गते प्रकाशित